ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်​နေ့တုန်းက နာမည်ကြီး ကိုရီးယားသတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SPOTV က လက်ရှိ ကိုရီးယား​ဖျော်​ဖြေ​ရေး​လောကမှာ လှုပ်ရှား​နေတဲ့ idol ​တွေရဲ့ လုပ်​ဆောင်ချက်​တွေကို ​လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး ​လတ်တ​လော ဖျော်​ဖြေ​ရေးနယ်ပယ်မှာ ကြီးစိုးကာ လျှမ်းလျှမ်း​​တောက် ​အောင်မြင်​နေတဲ့ idol ၆ ဦးကို ​ရွေးချယ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ idol ​တွေက​တော့
1. VIXX အဖွဲ့ဝင် Ravi
ပထမဆုံးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ VIXX အဖွဲ့ဝင် Ravi ဟာ လက်ရှိမှာ KBS ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ “2 Days & 1 Night” အစီအစဉ်ရဲ့ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ​ဖျော်​ဖြေ​ရေးစွမ်းရည်နဲ့ ဟာသဉာဏ်​တွေ​ကြောင့် MBC ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ “Don’t Be Jealous”, SBS ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ “Give Away the Answers Quiz Show: Today’s Delivery” နဲ့ tvN ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ “Idol Dictation Contest” အစီအစဉ်​တွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Ravi ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တုန်းက “Brand of the Year Award” ဆု​ပေးပွဲမှာ “Entertainment Idol of the Year” ဆုကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါ​သေးတယ်။
2. SEVENTEEN အဖွဲ့ဝင် Seungkwan
SEVENTEEN အဖွဲ့ဝင် Seungkwan ဟာလည်း တတိယမျိုးဆက် Idol ​တွေထဲမှာ ​ကိုရီးယား ရသစုံရှိုး​လောကကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Idol တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ ယခုနှစ်ထဲမှာလည်း သူဟာ tvN ရဲ့ “Racket Boys” နဲ့ TVing ရဲ့ “Idol Dictation Contest” တို့မှာ ပါဝင်ထားပါ​သေးတယ်။
ဒါ့အပြင် “Amazing Saturday” နဲ့ “MMTG” တို့မှာလည်း ဧည့်သည်အဖြစ် ပါဝင်ပြီး ပရိသတ်​တွေကို အူတက်​အောင် ရယ်​မော​စေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ variety show တိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကာရိုက်တာကို ပြသခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ မျက်နှာအမူအရာ၊ စကားလုံးနဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟန်ပန်​တွေကို ပရိသတ်​တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ စွဲကျန်​နေ​အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။
3. EXO အဖွဲ့ဝင် Kai
EXO အဖွဲ့ဝင် Kai က​တော့ K-Pop ​​လောကရဲ့ အကဘုရင်အဖြစ် လူသိများရုံသာမက “Entertainment God” အဖြစ်လည်း လူသိများပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထူးချွန်ပြီး သဘာဝဆန်တဲ့ ဟာသ​တွေ​ကြောင့် ပရိသတ်​ အာရုံစိုက်မှုကို ပိုမိုရရှိလာခဲ့ပြီး tvN ရဲ့ “Devil Wears Jeongnam,” TVing ရဲ့ “Idol Dictation Contest,” နဲ့ tvN ရဲ့ “Udo Inn” စတဲ့ အစီအစဉ်​တွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတာ​ကြောင့် “CJ ENM ရဲ့ သား” လို့​တောင် တင်စား​ခေါ်​ဝေါ်ခံရပါတယ်။
ဒါတင်မက​သေးပဲ JTBC ရဲ့ “Knowing Brothers,” MBC ရဲ့ “I Live Alone” နဲ့ tvN ရဲ့ “Sixth Sense 2” တို့မှာ သူ့ရဲ့ ​ဖျော်​ဖြေ​ရေးစွမ်းရည်ကို ထုတ်​ဖော်ပြသခဲ့တာ​ကြောင့် ​ဖျော်​ဖြေ​ရေး​လောကရဲ့ “blue-chip” လို့လည်း သမုတ်ခံရပါတယ်။
4. Golden Child အဖွဲ့ဝင် Lee Jang Jun
Golden Child အဖွဲ့ဝင် Lee Jangjun က​တော့ လက်ရှိမှာ အသက်အငယ်ဆုံး “Entertainment Leader” လို့ ဆိုရမှာပါ။ သူဟာ ယခုနှစ်ထဲမှာတင် “Will This Work”, “Idol Dictation Contest”, “The Shop Next To The Best” နဲ့ “Drinking Guys” စတဲ့ variety show ​တွေမှာ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပြီး ​​variety show ​​လောကကို ကြီးစိုးထားပါတယ်။ ​​နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကိုရီးယား​ဖျော်​ဖြေ​ရေး​လောကမှာ ထင်ရှားတဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ်ထွန်း​တောက်လာဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
5. LOVELYZ အဖွဲ့ဝင်​​ဟောင်း Lee Mi Joo
မိန်းက​လေး idol ​တွေထဲမှာ​တော့ LOVELYZ အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း Lee Mi Joo က လက်ရှိ variety show ​လောကမှာ အ​တော်​လေး လူကြိုက်များပြီး ​အောင်မြင်​ကျော်ကြားလျက်ရှိပါတယ်။ သူမဟာ idol တစ်​​ယောက်ရဲ့ ​ချော​မောလှပတဲ့ ရုပ်ရည်​လေးနဲ့ မလိုက်​​လောက်အောင် ပွင့်လင်းလွန်းပြီး ဟာသဉာဏ်ရွှင်ကာ အကဲပိုတဲ့ အမူအရာ​တွေလုပ်ပြတတ်တာ​​ကြောင့် ပရိသတ်အချစ်ကို ရရှိ​နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Mi Joo ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်​တွေထဲမှာဆိုရင် MBC ရဲ့ “How Do You Play?” နဲ့ tvN ရဲ့”Sixth Sense” တို့က နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူမဟာ ယခုနှစ် “Brand of the Year” ဆု​ပေးပွဲမှာလည်း “Entertainment Idol of the Year” ဆုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိ​ ကိုရီးယား ​ဖျော်​ဖြေ​ရေး​လောကမှာ ​ရေပန်းအစားဆုံး idol ဆိုတာကို သက်​သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
6. IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း Yena
​နောက်ဆုံးတစ်ဦးက​တော့ variety show တိုင်းမှာ သူမရဲ့ ချစ်စရာ​ကောင်းတဲ့ ဆွဲ​ဆောင်မှုနဲ့ ပရိသတ်​တွေကို အမြဲဖမ်းစားနိုင်တဲ့ IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း Choi Yena ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Mnet ရဲ့ “Produce 48” အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်စဉ်တည်းက အားအင်အပြည့်နဲ့ တက်ကြွတဲ့ အကျင့်စရိုက်ကြောင့် ရှားပါးတဲ့ ကာရိုက်တာအဖြစ် လူ​တွေက သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။
အခု​နောက်ပိုင်းမှာလည်း tvN ရဲ့ “Prison Life of Fools” နဲ့ MBC ရဲ့ “Game of Blood” အစီအစဉ်​တွေမှာ ပါဝင်ပြီး သူမရဲ့ အ​ပြောအဆို ​ချော​မွေ့မှုနဲ့ ​ဖျော်​ဖြေ​ရေးစွမ်းရည်​​တွေကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာဆိုရင် “Yena’s Animal Detective” ဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်​တော်အစီအစဉ်က​​နေတစ်ဆင့် ပိုမိုထူးချွန်တဲ့ ​entertainment idol အဖြစ် တိုးတက်လာလျက်ရှိပါတယ်။
Next 2021 MTV EMAs မှာ ဆုပေါင်းများစွာသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ BTS နှင့်, aespa အဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်တင်မှုတစ်ခု »
Previous « Idol ဖြစ်နေတာကြောင့် သာမန်မိန်းကလေးတွေ လုပ်လို့ရတဲ့အရာ (၂) ခုကို မလုပ်နိုင်ရှာတဲ့ Jihyo
အချောအလှ ၂ ဦးရဲ့ လိုက်ဖက်အညီဆုံးဖြစ်လာမယ့် “Snow Eagle Lord” ကို ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်